★How to run JPG as an EXE [Shortcut Executing Method][EXCLUS | Shwekoyantaw
★How to run JPG as an EXE [Shortcut Executing Method][EXCLUS
Published : 11:35 PM Author : shwekoyantaw
ဓာတ်ပုံဖိုင်(.jpeg)တစ်ခုကို .exe တစ်ခုလို ဘယ်လို run နိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို MHFမှာ ဆွေးနွေးတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် မှားရင် ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်..ပုံလေးတွေပါထည့်လိုက်ပါတယ်... ဒီနည်းလေးဟာ ဘယ်ဝင်းဒိုးOS မဆို အလုပ်လုပ်ပါတယ်..လိုအပ်ချက်တွေက
တော့ .exe ဖိုင်တစ်ခုနဲ့ ဓာတ်ပုံဖိုင်(.jpeg)တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်.... .exe ဆိုတဲ့နေရာမှာ keylogger(or)stealer(or)server.exe ကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်...
အဆင့် (၁) - (New)Folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ.(Ctrl + Shift + N နဲ့ ဆောက်နိုင်ပါတယ်)
အဆင့် (၂) - ဆောက်လိုက်တဲ့ Folder ထဲကို .exe ဖိုင်တခုထည့်လိုက်ပါ..(ဥပမာ. server.exe)
အဆင့် (၃) - .exe ဖိုင်(server.exe) ကို right click ထောက်ပြီး "Create Shortcut Here" ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ..
အဆင့် (၄) - ထိုshortcut ကို "IMG_0163.jpg" လို့အမည်ပေးလိုက်ပါ..(အမည်ကို "IMG_0163"မဟုတ်ဘဲ ကြိုက်တာပေးနိုင်ပါတယ်)
အဆင့် (၅) - အဲ့ဒီ shortcut ကိုပဲ right click ထောက်ပြီး "Properties" ကို ရွေးပါ..ပြီး Target: နေရာက စာသားတွေနေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလိုက်ပါ...
"C:\_WINDOWS\_system32\_cmd.exe /c IMG_0163.jpg"
အဆင့် (၆) - နောက်တစ်ကြိမ် အဲ့ဒီ shortcut ကိုပဲ right click ထောက်ပြီး "Properties" ကို ရွေးပါ .jpeg ဖိုင်လို တိကျတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ .ico ဖိုင်ကို ရှာပြီး "Chang icon"မှ တဆင့် icon ပြောင်းလိုက်ပါ..
အဆင့် (၇) - နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ shortcut ကို အခြား(.jpeg လဲဖြစ်မဲ့)ဖိုင်ကို rename လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..အဲ့ shortcut ဖိုင်ကို အပေါ်က ဖိုင်နာမည်နဲ့ မတူတဲ့ ဖိုင်နာမည်(ဥပမာ- IMG_0164)ကို ပေးလိုက်ပါ...
ထို shortcut ဖိုင်လေးကို run လိုက်တဲ့အခါမှာ ထိုဓာတ်ပုံ(ဥပမာ IMG_164.jpg)ဖိုင်လေးဟာ .exe အဖြစ်နဲ့ ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်...ဒါကို cmd နဲ့ ထင်ရှားသိသာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ cmd box က သိသာအောင်
ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ (.jpeg ပုံစံပြောင်းထားတဲ့).exe (တနည်းအားဖြင့် server.exe/keylogger.exe/stealer.exe)ဖိုင်လေးဟာ system မှာ run ပြီး သားဖြစ်နေပါပြီ... Task Manager ထဲမှာတော့ သာမန်ဓာတ်ပုံဖိုင်(.jpeg)ဖိုင်လေး run နေတာကို ပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဓာတ်ပုံဖိုင်(.jpeg)အဖြစ် run စေဖို့ shortcut ကို ဖွင့်ထားရပါမယ်... ဒီနည်းလမ်းလေးကို KennySmoothx က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..
Dominican Republic Police arrested6Anonymous hac...
.::How to Make Batch Yourself & Some Batch Code::....
www.nanuindia.com H@cK By ME
Sql injection Tutorials::..
sql injection with tool(havij) tutorial
List of Webs Hacking Techniques
"Tmedit Popuop" Deface and Shell upload vulnerabil...
..::Sql poizon v1.1 tutorial::..
<---Manual Sql Tutorial[Bypassing Admin Login]--->...
How to work Facebook Wall Flooder
@utorun virus making
..::Facebook Wall Flooder::..
★How to run JPG as an EXE [Shortcut Executing Meth...
This is what we called “Hacking
daily use 10 of Linux Commands
..::Hacking Facebook Accounts Passwords Tutorial::...
IIS Hacking Tutorials